AWS - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Amazon Web Services (AWS) inopa IT zvivakwa zvebasa kumabhizinesi sewebhu masevhisi. AWS inopa kuvimbika uye kusagadzikana kunodiwa pakuenderera mberi kwekuita bhizinesi, zvichikonzera kuwedzera kwekuita uye kugona bhizinesi.
Nei uchienda neAWS?
AWS inopa zvakawanda zvakanaka kumasangano mukumisikidza uye kutanga kuuraya nekukurumidza. Izvi zvinonyanya kubatsira kutanga kwekutanga kutsvaga kwakaderera-kudhura mari kune server setups uye zvakare kumabhizinesi anotarisa kufambisa maseva avo kune iro gore. Izvo zvakanakira AWS inopa pamusoro pesimba server setups ari
Vhura uye Flexible
Agile uye Instant Elastic
Isu tinoshandisa musanganiswa weanoverengeka masevhisi eAWS kusangana neyako gore mhinduro zvinodiwa
AWS Mobile Ongororo
AWS: Iyo yakazara Cloud Platform Service
AWS inopa zvakawanda zvakanaka kumasangano mukumisikidza uye kutanga kuuraya nekukurumidza. Izvi zvinonyanya kubatsira kutanga kwekutanga kutsvaga kwakaderera-kudhura mari kune server setups uye zvakare kumabhizinesi anotarisa kufambisa maseva avo kune iro gore.